Xfs oo dar dar gelinaysa sharciga hay,adda duulista soomaliya.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, Maxamed Cabdullaahi Salaad (Oomaar), Maareeyaha hay’adda duulista rayidka Soomaaliyeed, Axmed Macallim Xasan iyo maareeya ku-xigeenkiisa, Sheekh Jaamac ayaa maanta kulan […]
Itoobiya oo xaqiijisey in soomliland, puntland u aqoonsantahay maamulo hoostaga soomaliya.
Itoobiya ayaa ka hadashay qoraal lagu arkay bogga internet-ka ee wasaaraddeeda arrimaha dibedda, kaas oo Somaliland iyo Puntland lagu daray liiska dalalka ay matalaad diblumaasiyadeed […]
Madaxweynaha umadda soomliyeed oo ka qeyb galaaya shirka iskaashiga wadamada islaamka ee ka dhacaaya magalada barakeysan ee makka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada barakaysan ee Makka kaga qeyb gali doona Shir Madaxeedka Ururka Iskaashiga Islaamka (IOC). Meertada 14-aad […]
Raisul wasaare kheyre oo shir gudoomiyey shirka tubta guud ee gobolka banaadir.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta guddoomiyay shirka tubta guud ee gobalka Banaadir oo lagu qabtay xarunta maamulka gobalka Banaadir. […]
Gudoomiye yariisow oo kulan laqaatey waaxyaha kala duwan ee gobolka fareyna inay xoojiyaan shaqooyinka ay shacabka u haayan.
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyeha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa faray Waaxaha Maamulka Gobolka, Dowladda Hoose ee Xamar iyo Guddoomiyeyaasha Degmooyinka fulinta qodobadii iyo […]
Ciidanka amniga oo kordhiyey howlgalada amni ee dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho.
Howlgalkaan lagu sugayay Amniga Caasimadda ayaa Ciidamada sida gaarka ah u tababaran waxaa ay ka sameeyeen waddooyinka Sodonka,Warshadaha iyo duleedka magaalada Muqdisho,si loo xoojiyo amniga […]
Dowladda kenya oo wada olole ay culeys ku saareyso ganacsatada soomaliya iyo badeecadaha ay leeyihiin.
Xilli uu sii xoogeysanaayo Khilaafka u dhaxeeya dalalka Somaliya & Kenya ayaa dowladda Kenya waxa ay soo saartay go’aano hor leh oo saameynaya hananka ganacsiga […]
Booliska soomaliya ayaa gacanta kusoo dhigey dad dil iyo falal amni daro kawadey caasimadda dalka.
Saraakiisha Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa waxaa faah faahin ay ka bixiyeen hawlgalladii ugu dambeeyay ee Ciidamada Booliska ay ka sameeyeen degmoyin ka tirsan gobolkan Banaadir, […]
Duqa muqdisho Eng yariisow ayaa kormeer ku marey qeybo ka mida magalada isago u kuur galaayey amniga iyo isu socodka bulshada caasimadda.
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa dhalinyarada ku nool Caasimadda ku boggaadiyey sida wanaagsan ee ula shaqeeyaa Ciidanka Amniga […]
Wasiirka batroolka iyo macdanta ayaa sheegey in shidaalka laga soo saarayo soomaliya uu leeyahay faaido iyo qasaaro is bar bar socda
Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Soomaaliya Cabdirshiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in howlgalada Batroolka lagu baarayo ama lagu soo saarayo Batroolka Dalka uu leeyahay faa’iido […]